Hazon' ny Noely - Wikipedia
Hazon' ny Noely
Ny hazon' ny Noely na hazon' ny Krismasy (na hazo Noely, hazo Krismasy) dia hazo na sary hazo nohingoina sy noravahana ao am-piangonana na any an-tokanrtano na eny amoron-dalana na eny an-jaridaina, mba hoenti-mankalaza ny fety Kristiana Noely na Krismasy. Fomba nolovana hatry ny ela efa tamin' ny Andro Antenantenany izay nalaina tahaka tamin' ny fombam-pivavahana natao tamin' ny fotoan' ny firavoravoana manakaiky ny fisasahan' ny ririnina any amin' ny ila-bolantany avaratra tamin' ny Andro Taloha. Tamin' ny Andro Antenantenany no nisehoany voalohany tao amin' ireo firenena jermanika ka niely tsikelikely tany Eorôpa sy tamin' ny toeran-kafa izany tamin' ny taonjato faha-19. Raha hazo keska ny hazon' ny Noely tamin' ny fiangohany dia tsy mifidy hazo izany ankehitriny, indrindra amin' ireo faritra eto ambonin' ny tany tsy ahitana hazo kesika. Na dia izany aza dia misy ny hazon' ny Noely vita amin' ny plastika izay maka tahaka ny endriky ny hazo kesika.
Ny hazon' ny Noely, ankehitriny, dia ravahana amin' ny alalan' ny bolan' ny Noely sy girlandy tsotra, na miravaka jiro na labozia ary zavatra madinika isan-karazany fanaingoana, ahitana kintana maro ka ny lehibe indrindra dia apetraka eny amin' ny tampon' ny hazon' ny Noely.
Ny zavamaniry atao hazon' ny Noely dia amidy efa avy notapahina na avarora anaty tavy, ka ity farany ity dia azo avela ho velona mba hampiasaina amin' ny Noely manaraka. Misy koa ny manao hazon' ny Noely eny ivelan' ny trano: eny an-tokontany na ao an-jaridaina. Ny hazon' ny Noely namboarina (vita amin' ny plastika, sns) fa tsy naniry dia azo ampiasaina indray amin' ny Noely manaraka raha tsy mora simba, ka azo safidianina hasolo ny hazon' ny Noely avy amin' ny hazo naniry notapahina. Ny fampiasana hazon' ny Noely namboarina dia fomba iray ialana amin' ny fanapatahana hazo, nefa ny fampiasana izany dia tsy azo lazaina ho fomba anajana kokoa ny tontolo iainanana raha mitaha amin' ny hazon' ny Noely voajanahary, noho ny fandotoana mety ateraky ny fanariana azy rehefa tsy azo ampiasaina intsony.
Toy ny amin' ny Noely na Krismasy ihany dia tsy misy firesahana momba ny hazon' ny Noely ny ao amin' ny Baiboly. Izany anefa tsy mahasakana ny mpiaro io fomba io hanamarina azy amin' ny fampahatsiahivana andalana sasany ao amin' ny Baiboly. Ny fiangonana tsy mankalaza Noely dia tsy mampiasa hazon' ny Noely.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hazon%27_ny_Noely&oldid=999298"
Voaova farany tamin'ny 25 Desambra 2020 amin'ny 12:06 ity pejy ity.